Astaamaha SEO ee laga soo bilaabo Khabiirka Cimilada
Markaan samayno boggayaga internetka, suuq-geynta dijital ah waxay ina soo galeysaa caqabad weyn. Shirkadaha waaweyn ayaa ka xanaajiya hawsha ay ku hayaan qorshayaasha suuq-geynta ee digital-ka ah gaar ahaan marka ay qabtaan shaqooyinka caadiga ah. Internetku waa kheyraad ballaaran oo leh macluumaad qiimo leh qof walba. Macaamiisha Webka waxay isticmaalaan internetka si ay ula xiriiraan macaamiishooda oo ay sameeyaan website-yo kuwaas oo aad u xaddidan. Tusaale ahaan, dadku waxay sameeyaan boggag internet oo leh heer aad u sarreeya. Maaddaama gaadiidku uu kordho, hogaamiyaasha iyo ugu dambeyntii habab sameynta iibinta ayaa hagaajinaysa - lierac premium fluide anti age.
Nidaamka raadinta raadinta ( SEO ) waa farsamo suuq geynaya kaas oo kordhiya booqashooyinka boggagaaga adigoo ka helaya search engine searches. Dhammaan bartilmaameedyada SEO-yada ah ee kor u qaadaya awooddaada calaamaddaada iyo bartilmaameedka si loo suuro galiyo habka loo sameynaayo websaydh in ay helaan macaamiisha ku filan ee macaamiisha. Newbies waxay ku dhacdaa qaar ka mid ah talaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u qaataan marka ay bilaabayaan hababka SEO. Xaaladahan, waxaa jira siyaabo badan oo ay ku dhici karto SEO-yada.
Ryan Johnson, Maamulaha Sare ee Sare Semt , wuxuu qeexayaa qaar ka mid ah tixgelinnada muhiimka ah ee SEO:
Horumarinta waxyaabaha ku jira boggaaga ma aha hawl fudud. Xaaladaha intooda badan, khubarada ayaa soo jeedinaya mid ka mid ah in uu raadiyo shaqaale u qalma in uu sameeyo mawduuca bogga. Kadib sameynta cilmi-baarista ereyada, waa inaad sameysaa nuxurka webka adigoo isticmaalaya ereyada muhiimka ah. Waxaa jira habab kala duwan oo aad isticmaali karto si aad uhesho ereyada muhiimka ah. Iyada oo ku xiran nooca content waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho website-kaaga, waxaad awoodi kartaa inaad ku qorto sheeko wanaagsan kaas oo ah midka ugu muhiimsan ee dhagaystayaashaada. Tilmaamahan ayaa ah qodobka raadinaya makiinadaha loo isticmaalo si loo darajeeyo bogagga internetka
Dib u qaabeynta
Naqshad tartameed waxay u baahan tahay qaybo muhiim ah oo ka mid ah helitaanka awood ka imanaysa domiyo kale. Nidaamkani wuxuu dhacaa iyadoo la adeegsanayo habab aad ufiican oo loo yaqaan 'backlining'. Backlinks wax ku ool ah ayaa aasaas u ah qaar ka mid ah qalabka webmaster waxtar leh ee loogu talagalay isticmaalka isku xirka qaababka bogga iyo goobaha. Backlinking wuxuu keenaa qayb ka mid ah awooda astaanta ah ee ku jirta niche. Markaad adigu noqotid mid awood u leh, waxay sare u qaadeysaa siyaabaha loo helo macaamiisha internetka badan.
SEO waa farsamo wax ku ool ah kaas oo samayn kara suuq-geynta shabakada oo ku guuleysan karta boggaaga. Waa lagama maarmaan in mulkiilaha kasta oo websiteka ah uu fuliyo xaddiga internetka ee suuq-geynta internetka sida SEO-da si ay u soo saaraan macaamiisha caalamiga ah ee badan. Xaaladaha badankood, dadku waxay u muuqdaan kuwo ka faa'iideystaan ​​gaadiidka uu SEO abuuro. Waxaad ku guuleysan kartaa goobtaada iyadoo la adeegsanayo wax ku ool ah. Tilmaamahan wuxuu kaa caawin karaa iyada oo la marayo hannaanka miisaankaaga boggaaga mashiinka raadinta.